O teghị aka n’oge gara aga na ndị na-eri ihe anaghị enwe ntụsara ahụ na ha itinye data kaadị kredit ha na ntanetị iji zụta. Ha atụkwasịghị saịtị ahụ obi, ha atụkwasịghị ụlọ ahịa ahụ obi, ha atụkwasịghị mbupu obi… ha atụkwasịghị ihe ọ bụla obi. Otú ọ dị, ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, na nkezi ndị na-azụ ahịa na-eme ihe karịrị ọkara nke ihe ha zụrụ n'ịntanetị!
Ejikọtara ya na ọrụ ịzụ, nhọrọ dị egwu nke nyiwe ecommerce, enweghị ebe nkesa saịtị, yana ihe mgbochi iji banye… ecommerce na-arị elu na ma ọkaibe ma uto. N’iburu nke ahụ n’uche, ọ dị mkpa ilelị otu ị ga-esi mee ka ụlọ ahịa gị dị iche na ntanetị.
SSL2Zụrụ, onye na-eweta SSL zuru ụwa ọnụ, ewepụtala usoro iri eCommerce iji lelee anya na 2017 gbakọrọ n'ime ọmarịcha ihe ọmụma a:
Ọgwụgwụ nke Black Friday na Cyber ​​Monday - ebe ọ bụ na ịchọghị ịhapụ ihe ndina gị ma lụọ ọgụ n'ahịrị, ecommerce na-ebelata mmetụta nke ụbọchị ahịa ndị a na omume ịzụta na-agbasa na ọnwa niile nke Cyber ​​Nọvemba.
HTTPS achọrọ na Afọ 2017 - Na-enweghị njikọ SSL, ndị ahịa na ndị na-eweta ecommerce na-adaba adaba karịa inweta data ezuru ma ọ bụ usoro hacked. Google ekwenyelarị SSL abanyela na algorithms dị elu, ọ bụ oge iji chebe saịtị ọ bụla ị nwere ebe a na-anakọta ma ọ bụ gafere data.
Na-ere omni-ọwa - Ndị na - azụ ahịa Multichannel na - emefu ihe karịrị ugboro atọ karịa ndị na - azụ ahịa otu ụzọ chọrọ ndị na - azụ ahịa ịzụlite mkpọsa dị mgbagwoju anya nke na - eso ndị na - azụ ahịa ma duru ha gaa zụta ma ha nọ n’ụlọ ahịa, ekwentị, ma ọ bụ ebe ọ bụla.
Tags: Amamịghe echichennukwu datanwa ogecyber mondaynnyefeịzụ ahịa ikeozi ecommerceusoro ecommercehttpsinfographicịzụ ahịa ekwentịecommerce omnichannelomnichannel na-erena-emegharị ahụnnyefe otu ụbọchị ahụịzụ ahịana-ere na-elekọta mmadụmbupushoppingịzụ ahịa ahụmahụazụmahịa azụmahịaecommerce mmadụna-elekọta mmadụ na-ereSSL